Kadib 9-guul Oo xiriir Ah Tababaraha Arsenal Oo War Fiican Ka Helaya Xidigahii Dhaawaca Kaga Maqan Kooxda Qaarbaba Maanta Tababarka Ku Soo Laabtay - GOOL24.NET
Kadib 9-guul Oo xiriir Ah Tababaraha Arsenal Oo War Fiican Ka Helaya Xidigahii Dhaawaca Kaga Maqan Kooxda Qaarbaba Maanta Tababarka Ku Soo Laabtay
Tababare Unai Emery ayaa war wanaagsan ka helaya xaalada dhaawaceed ee qaar kamida xidigiha Ugu muhiimsan ee kooxdiisa Arsenal walow kooxda uu hogaamiyo ay ku socoto wadada guulaha hadana waa u farxad sheekada laga soo calaamadeynayo xidigaha kooxda ka maqnaa baryahan .
Maqnaanshiyihii kullankii Axada 5-1 kaga badiyeen Fulham, Mesut Ozil ayaa maanta dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee kooxda waxaana uu soo xaadiray xarunta L ondon Colney waana war ay ku farxi karaaan jamaahiirta kooxda kubada cagta arsenal .
Laaciibkii hore ee Real Madrid ayaa haatan rajeenaya in lagu soo bilaabo safka Arsenal ee kullanka soo aadan ay wajihi doona Leicester City In Kastoo Isaga la ‘aantiis ay kooxdiiisa guul gaaratay ha yeeshee waa mid aan loo quuurin in safka laga reebo marka laga cabir qaato misaankiisa xakameynta kubadda Koooxda .
Ainsley Maitland-Niles ayaa sidoo kale la warinayaa in isaguna uu todobaadka dambe kusoo laabto tababarka kooxda si uu fursad u helo dheesha qeybta ka ah Ciyaaraha horyaalka oo ay wajihi donaan Dawacooyinka.
Kooxda Gunners ayaa sidoo kale xaqiijisay in goolhaye Petr Cech la rajeenayo inuu tababarka naadiga kusoo laabto 3-4 usbuuc ee soo Aadan waxaana uu la xauunsanayaa dhaawac muruqa kasoo gaaray, Waxaase ay maqnaashihiisa dabooli kara gool hayaha reer Germany ee Leno halka kabtan Laurent Koscielny isaguna uu kooxda kusoo laabanayo bisha November.
Ciyaaryahanka xulka qaranka Frence ayaa haatan biloway inuu socdo maadama baxnaano lagu wado kadib dhaawicii kasoo gaaray bishii May ciyaartii ay wajaheen Atletico Madrid, balse tababarka buuxa ee kooxda ayuu kusoo laaban doonaa bisha soo aadan.
Arsenal ayaa haatan ku socota wado guuleed waxaana ay guuleesteen 9-kullan oo xiriir ah dhamaan tartamada, halka 6 guul oo xiriir ahna ay ka gaareen horyaalka Premier League.